Nwa nkita 5.0 dị! | Site na Linux
Linux Puppy Ọ bụ otu ihe ọzọ Linux distro. Ihe dị iche na ya na ndị ọzọ bụ obere obere ya, na-enweghị na-egosi oke ọnwụ nke arụmọrụ na njirimara. Nwa nkịta puppy n'ime disk 64MB, ma ọ bụ ya, usoro niile na-ebu ebe ahụ. N'adịghị ka nkesa Live CD dị mkpa iji na-agụ CD kpamkpam, Puppy na-ebu ibu n'ime ebe nchekwa RAM anyị. Nke a pụtara na ngwa "ofufe", meghere site na ịpị pịa, ma zaghachi arịrịọ ndị ọrụ n'otu ntabi.
Nwa nkita Linux nwere ike ibido pendrive ọ bụla, CDROM, ZIP disk, floppy disk, disk diski, wdg. Younwere ike iji CD-R / DVD-R edere na multisession, ka ị nwee ike ịchekwa ntọala gị niile na CD / DVD na-enweghị mkpa diski diski.
1 Lucid nwa nkita 5.0
2 Atụmatụ ọhụrụ na Lucid Puppy 5.0
Lucid nwa nkita 5.0
Lucid nwa nkita 5.0 Ọ dabere na ụlọ ewu ewu Puppy Linux a ma ama na Barry Kauler, onye okike ya, emezigharịrị karịa nsụgharị 4 nke Puppy. Ma na nke ugbua Puppy wuru na ọnụọgụ abụọ nke ngwungwu Ubuntu kachasị ọhụrụ (Lucid Lynx), ya mere aha ya Lucid Puppy 5.0.
N'ihi ojiji nke ọnụọgụ abụọ nke Ubuntu Lucid, oge mmepe iji mepụta nchịkọta ndị a nwalere ma hazie maka Lucid Puppy dị mkpụmkpụ. N'ezie, otu n'ime ihe ọhụrụ dị na Lucid Puppy bụ Quickpet, nke na-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ mmemme Linux site na ịpị dị mfe. Nwụnye bụ hyper transperent na onye ọrụ nwere ike ịgba ọsọ ngwa na jiffy.
N'agbanyeghị na ọ dị ezigbo ọkụ, Lucid Puppy abụghị otu n'ime distros ndị ahụ na-amalite na njedebe, site na mbido onye ọrụ nwere ike ịnwe desktọọpụ ọdịnala ma nweta ngwa ndị kachasị ewu ewu. Ntọala desktọọpụ dị mfe ma na mkpịsị aka gị. Lucid Puppy na-abịa na Abiword, Gnumeric okwu processor ijikwa mpempe akwụkwọ, Geany ederede editọ, Chromium dị ka ihe nchọgharị iji sọfụ ịntanetị, wdg. Ejikọtakwara ya bụ ngwa ọrụ ọhụrụ maka ahazi njikọ ịntanetị, akpọrọ Mfe Ntọala Ntanetị. N'ikpeazụ, Lucid Puppy gụnyere ngwá ọrụ iji wụnye bugfixes ngwa ngwa.
Atụmatụ ọhụrụ na Lucid Puppy 5.0
Mmelite dị ukwuu mgbe ị na-eji sistemụ Aufs
Nchọpụta akpaaka na nhazi nke 3G na modụl analog.
Meziri ọtụtụ "chinchi" metụtara ibipụta site na SAMBA
Nnukwu ndozi na nchọpụta ngwaọrụ na nhazi nke Xorg
Ọtụtụ mmelite na ndozi ahụhụ metụtara mmalite kọmputa na edemede edemede
Ntọala Ntọala Dị Mfe (SNS), ugbu a ọ dị mfe ịhazi eriri gị na njikọ ikuku
Iweghachite sistemụ mgbe mmechi siri ike na-atụghị anya ya
Obere ngwa ọrụ ha nwere eserese eserese ha
Ngwaọrụ dị mma maka ịmepụta na ijikwa nchịkọta PET
Systemfọdụ sistemụ usoro e budata mma
Enwere ike ịme ọrụ sistemu ugbu a ma ọ bụ nwee nkwarụ
Nchọpụta ngwaike ka mma na ịkọwapụta ihe na initramfs
Nnukwu ndozi na Woof distro ewu scripts na ihe ngosi eserese ọhụụ
Budata Nwa nkita 5.0
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Nwa nkita 5.0 dị!
Estebanelias 2 dijo
mmm, nsụgharị ọhụrụ ahụ dị mma nke ukwuu, mana ọ naghị amata bọọdụ mmepụta tv na nke m na-eji (agbalịrị m ntọala niile ahụ nke bịara na mmemme ahụ ma ọ nweghị onye n'ime ha rụrụ ọrụ), kama enwere m ụdị ochie Linux (nke ahụ) anaghị eji ubuntu) ma were ya zuru oke. ee, iji na lcd na crt nyochaa ọhụụ ọhụrụ a ka mma, mara mma eserese na ọtụtụ ngwaọrụ
Agbalịrị m ya ma enwere m nkụda mmụọ ebe oke oke ahụ anaghị arụ ọrụ, na mgbakwunye na nghọta.
Kedu ụdị ihe nwute bụ nke a. Adị m ọrụ n'aka ụbọchị ndị a, mana enwere m olileanya ịnwale ya n'oge na-adịghị anya! Mmakọ! Paul.